ဘင်္ဂလီအရေး တွေးမိသမျှ - အပိုင်း (၂)
ပင်မနေရာ မူဝါဒ/ဥပဒေ သုတေသန ဘင်္ဂလီအရေး တွေးမိသမျှ - အပိုင်း (၂)
ဘင်္ဂလီအရေး တွေးမိသမျှ - အပိုင်း (၂)	Tuesday, 12 June 2012 11:48	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	User Rating: / 11
PoorBest ????????????? ???????????? ????????????????
(ဒေါက်တာဇာနည် ပြောကြားချက်) ။ ယခုထက်ထိ နိုင်ငံရေးအရဖြစ်စေ၊ စစ်ရေးအရဖြစ်စေ ဒီနယ်မြေကို သိမ်းပိုက်နိူင်ရန် အစီအစဉ်ချထားမှုက အခိုင်အမာ ရှိနှင့်နေပြီးသားပါ။ ဒါဟာ လှုံ့ဆော်နေတာ မဟုတ်ပဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့တကွ မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက မျက်စိကိုဖွင့် နားကိုစွင့်ပြီး အထူးသတိပြုထားနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုဆိုရင် လူသားချင်းစာနာပါဆိုတဲ့ နိူင်ငံရေးလိုလို စကားတွေဟာ ဒီလိုဘင်္ဂလီ အဖျက်သမားတွေကို နှိမ်နင်းရာမှာ အနှောက်အယှက်များစွာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ပြည်“မ”နေ မြန်မာနိူင်ငံရေးသမား ဆိုသူတွေကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်း သဘောမပေါက်ကြတာပါ။ ဒီနယ်မြေကိုလည်း မရောက်ဖူးဘူး၊ ဒီသမိုင်းကိုလည်း မလေ့လာဖူးဘဲ စာဖတ်ပြီး ပြောနေကြသလိုပါပဲ။ တကယ်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဟာ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းပြီး ယဉ်ကျေးပြီးသားပါ။ ဒါကို ဘင်္ဂလီပြဿနာဖြစ်မှ ဆရာကြီး ဆရာမကြီးလေသံတွေနဲ့ ဆောင်းပါးတွေရေးကြ အသံတွေဗျူးပေးကြနဲ့ ကိုရွှေတို့ အတော်အလုပ်များကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျုိးမှာတောင် ဒီလိုစာမျိုးနဲ့ ဆရာကြီး လုပ်ထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မောင်တောမြို့ ပဋိပက္ခတစ်ခုအတွင်း ဒဏ်ရာရသူ ရခိုင်အမျိုးသား တစ်ဦး
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
သားပေါ်မည့်သူဟာ မွတ်ဆလင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စိတ်ပုံမှန်ရှိ စိတ်ကျန်းမာသူ။ (စိတ်ပေါ့သွတ်သူမဟုတ်ရ)
သားပေါ်မည့် သတ္တဝါသည် တရားတော်နှင့် ညီညွတ်ရမည်။ (ဝက် တောဝက် ခွေး မြွေ မျောက် ကျား ခြသေ့င်္ ဝက်ဝံ ကြွက် ကင်းခြေများ ကင်းမြီးကောက် ဖား မိချောင်း ပရွက်ဆိတ် ပျား သန်း ယင်ကောင် လောက် မြည်း လား အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါများ မဟုတ်ရ)၊
သားပေါ်မည့် သတ္တဝါသည် အရှင် (သို့) အသက်ရှင်နေရမည်။
သားပေါ်တိုင်း နှုတ်မှ ဘစ်စမီလာဟ် အလ္လာဟ်အရှင် နာမတော်ကို အောက်မေ့ရွတ်ဆို ပူဇော်သည်နှင့် သားပေါ်ခြင်း အမူပြုရမည်။
သားသတ်ရန် ကိရိယာသည် ချွန်ထက်ပြတ်ရှသော ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပြီး သတ်နေစဉ်အတွင်း သတ်သည့်ကိရိယာသည် သတ္တဝါနှင့်ကင်းကွာခြင်း မရှိစေရ (အကြိမ်ကြိမ် ခုတ်ထစ် သတ်ဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ပဲ ကြိတ်လှီးခြင်း)
သားသတ်ရာတွင် အသတ်ခံသတ္တဝါ၏ လည်မျိုတဝိုက်ရှိ လေပြွန်၊ အစာရေစာမျိုလမ်းကြောင်း၊ ပင်မသွေးကြောနှင့် သွေးပြန်ကြောများကိုပါ တပါတည်း ပိုင်းဖြတ်စေရမည်။ တဲ့….ခင်ဗျ။ လည်လှီးအသတ်ခံရမည့် သတ္တဝါဟာ အနှီစာရေးသူ ငြိမ်းချမ်းအေးသာ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လို ခံစားနေမလည်းဆိုတာ ခဏဝင်စဉ်းစားဖို့ပါ။
ဒါတွေ တင်ပြရေးသားနေတာဟာ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ စော်ကားခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်းများ အလျဉ်းမပါရှိပါ။ အဖြစ်မှန်အတိုင်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ သိရှိနားလည် သဘောပေါက်စေရေးကိုသာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အပိုင်း (၃) ကို မနက်ဖြန် ဆက်လက် တင်ဆက်သွားပါမယ်။